Home » Lahatsoratra farany farany » Editorial » Eo ambanin'ny velaran'ny fiainana jiosy
Kolontsaina • Editorial • Hostpost • People • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Filozofa alemanina, Martin Buber
Ny mponina any Eoropa Atsinanana, indrindra ny Polonina sy ny Okraina, dia mahantra, matetika tsy nahita fianarana, ary tsy nanana ny fomba sy ny fahaizan'ireo sangany Eropeana Andrefana. Noho ireo fahasamihafana lehibe ireo dia matetika ny manam-pahaizana eropeana tandrefana dia nanamavo ny vahoaka eropeana atsinanana monina amin'ny tany manakaiky an'i poloney ka hatrany amin'ny steppe rosiana ary avy any Ukraine ka hatrany amin'ny Balkans.
Ny vanim-potoana fin de siècle (faramparan'ny taonjato faha-19 sy ny fiandohan'ny taonjato faha-20) dia vanim-potoana volamena tamin'ny taratasy sy filozofia siantifika Alemanina.
Io vanim-potoana io koa dia taonan'ny fahantrana be tany Eoropa Atsinanana.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny lafiny roa amin'ny Eropa dia miseho amin'ny fomba maro. Eoropa Andrefana dia nanan-karena, kolontsaina ary be pitsiny.
Izay marina ho an'ny fiarahamonina eropeana ankapobeny, dia marina koa tamin'ny tontolo jiosy. Ny famotsoran'i Napoleon ny jiosy tamin'ny ghettos France sy Aleman dia nahatonga ny fiangonan'ny jiosy ho fiarahamonina eropeana tandrefana.
Ny jiosy eropeana tandrefana dia niteny ny fitenin'ny fireneny ary naka lamina ara-kolontsaina eropeana. Betsaka no nampianarina tany amin'ny oniversite tsara indrindra any Eropa. Toy ny tamin'ny mpiray tanindrazana aminy, Jiosy jiosy Eoropeana Andrefana maro no nanambany ny Jiosy Eoropa Atsinanana. Ny vahoaka jiosy poloney, rosiana ary ukrainien dia nahantra ary tsy nahita fianarana tamin'ny fiteny sy ny kolontsaina tandrefana. Nonina tao amin'ny tanàna antsoina hoe shtetls izy ireo (araka ny voalaza ao amin'ny "Fiddler on the Roof"). Ireo jiosy eropeana sy amerikana tandrefana dia nahita ireo rahalahiny atsinanana ho mariky ny zava-drehetra tadiavin'izy ireo handosirana.
Ao amin'ity kaontinanta mizara ity no iankinan'ny jiosy lehibe Filozofa alemana, Martin Buber (1878-1965), nandany ny tapany voalohany tamin'ny fiainany.
Nandritra ireo taompolo am-piandohan'ny taonjato faha-20, i Buber dia iray amin'ireo filozofa lehibe indrindra tany Alemana. Nanjary liana tamin'ny fiainan'ny Jiosy tany Eropa Atsinanana izy ary nanjary tetezana nampifandray ireo tontolo roa ireo.
Talohan'ny fiakaran'ny Nazia Alemana, i Buber dia mpampianatra tao amin'ny University of Frankfort ary mpanoratra nahay tamin'ny fiteny alemanina sy hebreo. Ny sangan'asany filozofika mahazatra "Ich und Du" (I sy Ianao) dia mbola vakiana manerantany.
Mpitsikera sy filozofa literatiora maro no nihevitra an'i Buber ho olona goavan'ny filozofia tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20. Ny asany akademika dia nisy fiantraikany lehibe tamin'ny sehatra isan-karazany, anisan'izany ny anthropology ara-pitsaboana, ny psikolojia filozofika ary ny teoria pedagogika. Mpandika Baiboly koa izy. Ny fandikan-tenin'i Buber sy Rosenzweig ny Soratra Hebreo dia mahazatra amin'ny literatiora alemanina.
Nanjary nahaliana an'i Buber ny tontolon'ny fiainana jiosy Eoropeana Atsinanana. Na dia nibanjina ny shtetl aza ireo mpiara-miasa aminy, dia hitan'i Buber fa eo ambanin'ireo faritra misavoritaka ireo vondrom-piarahamonina ireo, dia misy tontolo sosialy lalina sy mavitrika, tontolo iray izay be pitsiny sy be pitsiny ara-piarahamonina. Ny sanganasa literatiora malaza "Chassidic Tales" dia tsy vitan'ny hoe nanome haja ho an'ny fiarahamonina tsinontsinona, fa nampiseho kosa fa tsy ny eritreritra filozofika lalina no faritany tokana an'ny akademika tandrefana.
I Buber dia namelona ny fiainana tsy ny lafiny iombonan'ny fiainana shtetl ihany fa ny fifandraisany amin'Andriamanitra koa.
Buber "manasa" antsika ho amin'ny fiainan'ny shtetl. Nasehony fa ireo tanàna ireo, na dia mahantra amin'ny entan'izao tontolo izao aza, dia manan-karena amin'ny fomban-drazana sy ara-panahy.
Ny famakiana ny sanganasan'i Buber dia nanjary fantatsika fa ny olona noterena hiaina tao anatin'ny fahantrana sy ny fizahan-toetra dia afaka nanova ny fanantenana ho fihetsika sy fankahalana ho fitiavana.
Azontsika atao ny mamaky ny "Chasidic Tales" an'i Buber's amin'ny ambaratonga roa. Amin'ny ambaratonga voalohany, mamaky tantaram-bahoaka momba ny olona manandrana miroborobo eto amin'ity tontolo feno fankahalana ity isika, tontolo iray izay nahitana fiainana velona fotsiny dia nanakaiky ny fahagagana. Amin'ny sehatra lalindalina kokoa, isika dia mahita filozofia be pitsiny izay mampianatra ny mpamaky fientanentanana amin'ny fiainana ao anatin'ny famoizam-po.
Nandritra ny asan'i Buber dia hitantsika ny nahatonga ny mponin'i shtetl ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Tsy toy ny Eoropeanina Andrefana "be pitsiny", ireo mponina "tsy manam-pahaizana" ireo dia tsy nanandrana namaritra an'Andriamanitra. Niaina fifandraisana mitohy tamin'Andriamanitra fotsiny izy ireo. Ny olona tao amin'ny shtetl dia nampiasa teny kely. Na dia rehefa miresaka amin'Andriamanitra aza dia matetika ny fihetsem-po no naseho tamin'ny alàlan'ny mozikan'ilay "neegoon": hira tsy misy teny, ary ny fiakarana azy ireo no nahatonga azy ireo hanakaiky kokoa an'Andriamanitra.
Nanangona ireto angano ireto i Martin Buber, nofonosiny amina fonosana marani-tsaina teo amin'ny lafiny akademia, ary nahazoany fanajana izy ireo nanerana ny tany tandrefana.
Ny bokiny: "Hundert chassidische Geschichten" (angano Chassidic zato) sy "Die Erzählungen der Chassidim" (Tantara Hasidic) dia nampiseho ny halalin'ny fanahy teo afovoan'ny fahantrana ary nanolotra eritreritra vaovao manerantany momba ny fahendrena.
Nahomby izy tamin'ny fampidinana ny finoana mavitrika an'i Jewry Eoropa Atsinanana tamin'ny fiainana akademika maina tany Andrefana be pitsiny, nametraka taminay ny fanontaniana hoe tena nisy tsara kokoa ve ny vondrona?
Nasehon'i Buber ny fomba nanaparitahan'ny akademika tandrefana ny zava-misy, raha teo amin'ny tontolon'ny shtetl kosa dia nitady ny fahafenoana izy. Buber koa dia nanala sarona ny filozofia tandrefana amin'ny foto-kevitry ny tzimtzum: ny hevitra momba ny fihenan'Andriamanitra ary amin'izany dia mamela ny fanamasinana ny olon-tsotra. Ny famakiana an'i Buber, hitantsika ny fomba nahitan'ny mponin'ny shtetls an'Andriamanitra n'aiza n'aiza satria nataon'Andriamanitra toerana izay mety hitomboan'ny olombelona.
Buber dia tsy mijanona amin'ny famaritana ny fifandraisana misy eo amin'ny zanak'olombelona sy Andriamanitra (bein adam la-makom) fa miditra amin'ny tontolon'ny fifandraisana eo amin'ny samy olombelona (bein adam l'chaero).
Ho an'i Buber dia ny fifandraisana eo amin'ny olona ihany no mamorona lambam-pitiavana sy fiarovana amin'ny hatsiakan'ny fankahalana sy ny fitsarana an-tendrony. Ao amin'ny tontolon'i Buber, tsy misy fanavahana ny politika sy ny ara-panahy, ny asa sy ny vavaka, ny raharaha ao an-trano sy ny lehibe. Ny fahamarinana dia tsy hita amin'ny tsy fantatra, amin'ny mistery fa amin'ny mazava, amin'ny fifandraisan'ny olona sy ny fiainana. Mampiseho i Buber fa manova tontolo tsy misy fo ireo fifandraisana ireo ary amin'ny alàlan'ny fomban-drazana dia manome fiainana mendrika ny fiainana.
Amin'ny sarin'i Buber momba ny shtetl dia tsy misy olona tsara na ratsy tanteraka. Fa kosa, eo ny fikarohana ny teshuvah, ny fiverenana sy fiverenana amin'Andriamanitra miaraka amin'ny tena toetsika.
Manolotra antsika i Buber, toa an'i Sholom Aleichem izay nanoratako ny volana lasa teo, ny olon-tsotra izay mahita an'Andriamanitra amin'ny fahazarana mahazatra amin'ny fiainana. Ny olona ao amin'i Buber dia tsy mihoatra ny olombelona, ​​fa kosa miaina ny fiainany amin'ny fomba maha olombelona azy ireo mifandray amin'Andriamanitra. I Buber dia maneho an'io hetsika io amin'ny alàlan'ny olona tzadik (mpitarika ara-panahy sy ara-piarahamonina). Ny tzadik dia nanome voninahitra isan'andro, nanokana azy ho masina, tamin'ny alàlan'ny fahagagana tamin'ny fanamasinana ireo fahazarana amin'ny fiainana mandreraka sy tsy mahaliana.
Ny asa soratr'i Buber dia mamaritra tontolo iray tsy misy intsony.
Ravan'ny fankahalana an'i Eropa Nizeria sy ny ran'ny fitsarana an-tendrony, tsy misy afa-tsy tantara sisa tavela, fa ireo kosa dia tantara mitantara ny fiainana, ary izany dia vokatry ny filozofa alemanina mandanjalanja nandositra an'i Alemana ary nanangana ny fiainany indray. ao amin'ny Isiraely, isika koa dia afaka manamasina ny olon-tsotra ary mahita an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataontsika.
Peter Tarlow iny emeritus rabbi ao amin'ny Texas A&M Hillel Foundation ao amin'ny College Station. Mpitondra fivavahana ao amin'ny Departemantan'ny polisy ao amin'ny College Station izy ary mampianatra ao amin'ny College College Texas &&M.